Diego Costa Miyuusan Qas La'aan Noolaan Karin? Weeraryahanka Atletico Madrid Oo Kaddib Ganaaxiisii Siddeeda Kulan Ahaa Haddana Canshuur Lunsi Loo Haysto. - GOOL24.NET
Diego Costa Miyuusan Qas La’aan Noolaan Karin? Weeraryahanka Atletico Madrid Oo Kaddib Ganaaxiisii Siddeeda Kulan Ahaa Haddana Canshuur Lunsi Loo Haysto.
April 17, 2019 Apdihakem Omer Adem
Weeraryahanka ku can baxay qaska iyo ganaaxyada la dul dhigo ee kooxda Atletico Madrid Diego Costa ayaa markale fadeexad iyo ceeb canshuur lunsi ah dhexda kaga Jira walow dhawaan uun lagu ganaaxay erayo xun xun oo uu adeegsaday.
“Maamulka canshuuruhu waxa ay weeraryahanka Atletico ku eedaynayaan canshuur lunsi 1.1 Milyan ah oo la xidhiidha canshuuro la xidhiidha xuuquuqda sawirradiisa ee 2014-kii” Ayaa lagu yidhi wargeyska maalinlaha ah ee El Mundo.
Xiddigaha uGu sarreeya kubadda cagta haatan ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa horeba loogu ganaaxay sidan oo kale waxaana haatan baadhitaan lagu wadaa Neymar JR oo isla canshuur leexasasho loo haysto.
Isha canshuuraha ayaa uga shakisan 30 jirkan inuu lunsaday canshuurihii uu ka bixin lahaa heshiis uu sanadkii 2014 la galay shirkada Adidas.
El Mundo ayaa ku daraya in gudida dabagalka canshuuraha dalka Spain ay go’aansan doonaan haddii ay si rasmi ah u baadhayaan shakigan laga qabo xiddigan.
Ganaaxan ayaa kusoo beegmaya maalmo kooban kaddib markii Diego Costa lagu ganaaxay kulankii ay Camp Nou ku booqdeen Barcelona isaga oo af-lagaado xun u geystay garsoorihii kulanka ee Manzano.
Ganaaxaas oo ahaa mid siddeed kulan ah ayaa la micno ah in Diego uusan markale xilli ciyaareedkan gudihiisa xidhan doonin maaliyada kooxdiisa maadaama oo sidoo kale ay ka hadheen Copa Del Rey iyo Champions League.
Maxkamadaha ayaa hore Ronaldo ugu xukumay aduun lacageed oo dhan 18 Milyan iyo labo sano oo xabsi ah bishii January halka uu Messi bixiyay laba Milyan oo lacag ah laguna xukumay 21 bilood oo xabsi ah.